Rastra Daily | मनीषाको आत्मकथा- म मर्न चाहन्नँ
(बलिउड अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले लेखक नीलम कुमारसँगको सहकार्यमा लेखेको आत्मकथा ‘हिल्ड’ को अनूदित अंश।)
त्यो बिहान जब डा. मधु घिमिरेले मेरो परीक्षण गरे, मलाई सास फिरेजस्तो भयो। अब उनी भन्नेछन्, ‘सामान्य संक्रमण हो मनीषा, चिन्ता लिनुपर्दैन। केही दिनमै ठीक हुन्छ।’
त्यो पर्खाइको बीचमा मैले सयौंचोटि नर्सलाई सोधेँ, ‘डा. घिमिरे कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँ कहिले आउनुहुन्छ?’
मेरो मनको एउटा भाग थर्कमान भयो। मैले थकान, छटपटाहट र तनावले गलेको स्वरमा सुस्तरी सोधेँ, ‘के भयो? तिमीहरू मलाई किन केही भन्दैनौ?’
‘उपचार? तपाईं कस्तो उपचारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ?’ मैले आफ्नो भासिएको स्वर अलिकति उचालेर सोधेँ।
‘तपाईं के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ डाक्टर? कुन उपचारको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ?’ मैले उस्तै व्यग्रतासाथ सोधेँ।
‘मनीषा, तिमीलाई क्यान्सर भएको छ!’
‘क्यान्सर?’ मैले एक–एक अक्षर तौलँदै उच्चारण गरेँ। यस्तो लाग्यो, कोठाभित्र मेरो आवाज थर्किंदैछ।
‘मलाई कसरी क्यान्सर हुन सक्छ?’
म भन्दै थिएँ, ‘त्यसो हो भने किन तपाईं यसलाई काटेर फाल्दिनुहुन्न?’
मेरी काकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। केही समयअघि उहाँले पुटुक्क उठेको पेट हेर्दै भन्नुभएको थियो, ‘मनीषा, कतै तिमी गर्भवती त भएकी छैनौ?’
त्यही गर्भ रहने पाठेघर मैले चटक्क चुँडालेर फाल्ने कुरा गर्दा डा. घिमिरेले प्रस्ट, तर पराजित शैलीमा भने, ‘कति काट्नु? कहाँसम्म काट्नु? क्यान्सर जताततै फैलिसक्यो।’
‘मनीषा, म केही थप परीक्षण गराउन चाहन्छु– पेट स्क्यान र सिटीस्क्यान पनि,’ डा. आड्वानीले तीखो नजरले मतिर हेर्दै भने, ‘तर, अहिले ढिला भइसक्यो। तपाईं घर जानू। भोलि बिहान खाली पेट आउनुहोला।’
मेरो धैर्य गुम्दै थियो। छटपटी बढ्दै थियो। लाग्दै थियो, म आफैं कुदेर डाक्टरको क्याबिनमा जाउँ र सोधुँ, ‘डाक्टर, मेरो रिपोर्ट आएन?’
‘मनीषा, रिपोर्ट सही रहेछ, तपाईंलाई क्यान्सर भएको छ,’ डा. आड्वानीले कुरा नचपाई सोझै भने, ‘अन्तिम चरणको, पाठेघर क्यान्सर।’
पैतालिसको उमेर पछि महिलामा यौन सक्रियता बढी